Enye inkinga ukuthi ngokuvamile kubangela esisemthethweni ukukhathazeka kwabazali izingane osanda kuzalwa regurgitation. Zama ukuqonda ukuthi kungani kukhona lesi simo, futhi ngabe ufuna ukuxhumana ngalokhu kudokotela.
Regurgitation libizwa Ukuyekwa okungalindelekile yenombolo ukudla kusukela esiswini emuva emphinjeni kanye umlomo. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa ukuthi kuhlale kubonakala ezinsaneni ngokushesha noma emva kwesikhashana kokusuthisa. Ngokwezibalo, cishe ayisikhombisa amaphesenti izingane ezingaphansi kweminyaka engu-amasonto ayishumi nesithupha regurgitate ukudla okungenani kanye ngosuku.
Ezimweni eziningi, regurgitation - akulona uphawu lokugula, into ngokuvamile adlulisela kuwona uqobo yobudala ngonyaka owodwa. Nokho, abazali kufanele sikhathazeke uma ingane yakho kufanele regurgitation njalo.
izici yokwakheka umzimba usana yokuthi isakhiwo sabo predisposes ekuthuthukiseni lo mkhuba regurgitation. Isikhathi esining impela lezi ahlupheke ababelethwa kungakafiki isikhathi noma labo wawubona intrauterine ukukhula retardation. Ngokuvamile, njengoba ingane ikhula yayo wokugaya ukudla kuba ingashintshwa kabanzi nokuhlanza izitobhi.
Yiziphi izimo kungaholela yokuthi ingane ngokuvamile esephimisela up? Esinye isizathu kungenzeka overfeeding, ie ukwanda ukudla ezidla noma ukunciphisa ngezikhawu phakathi feedings. Lesi senzakalo sivame ukuba izingane ababehlanganyela ngenkuthalo ncela lapho ngokweqile ubisi e unina. Izingane ngubani beswela ibele, overfeeding kungadalwa ushintsho ubunjalo amandla. Lokhu kungenzeka ngenxa yokuthi omama ngokuvamile unmotivated ukushintsha izinhlobo amafomula kwaguqulwa. Ngu overfeeding regurgitation zenzeka, ngokuvamile ngokushesha kokusuthisa, lokunyathelisa nenani ubisi abangelutho (5-10 ml). Isimo jikelele umntwana amathe up akunamthelela, kukhona evamile kwesisindo akunankinga ngesitulo kanye nenhliziyo emnyama.
Esinye isizathu, okuholela iqiniso lokuthi ingane ngokuvamile esephimisela up - ke aerophagia noma ukugwinya ngesikhathi yokondla inqwaba emoyeni. Lesi senzakalo sivame ukuba izingane abangothathekile, ikakhulukazi uma umama ubisi kancane. Ngaphezu kwalokho, ukungenisa ngokweqile umoya siyenzeka ngenxa ayilungile engalibaleki webele ingono noma uma umbele iraba, ibekwe phezu ibhodlela, senziwa imbobo enkulu ngokweqile. Aerophagia sivame ukuba izingane ngubani ngesikhathi sokuzalwa kwadingeka enganele noma, Ngakolunye uhlangothi, isisindo somzimba kakhulu. Regurgitation kubangelwa yalesi sizathu, kukhona ngokuvamile emva kwamaminithi ambalwa kokusuthisa, ubisi ahlukaniswa nestvorozhennoe futhi umsindo sici umsindo emoyeni qeda.
Ingane ngokuvamile vomits uma izinkinga kanye amathumbu esiswini, okungukuthi, uma wathi wayebone ukuqunjelwa, amajaqamba emathunjini, flatulence. Kulokhu, ukushuba regurgitation zingase zihluke.
ukuhlanza eziphikelelayo kungaba uphawu lokuthi ingane samanje a malformation yokusetshenziswa pheshana emathunjini. Lokhu kungaba anomaly we emphinjeni, ubuthakathaka sphincter ukudla, omncane emnyango emphinjeni zingene esiswini, futhi ezihlukahlukene ezinye izizathu.
Ngakho-ke, uma ingane esephimisela up njalo, futhi lesi simo kuholela ukuhlukumeza isimo sakhe jikelele (kwesisindo, ukukhathazeka), khona-ke kubalulekile ukuba sibonise udokotela womntwana ukuze Uchwepheshe ukukhipha khona egunjini lokuhlolwa kwezifo.
Nokho, ukutshela udokotela ukuthi ingane ngokuvamile esephimisela phezulu, udinga noma kunjalo, ngisho noma wonke amanye inkomba impilo kungokwemvelo. Udokotela kutholakale imbangela yokushona regurgitation, futhi uma kudingeka, ukuncoma ukwelashwa.
Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi udinga nje ukhethe indawo efanele ukuze ancele, okungukuthi, ukugcina ingane ebeleni ukuze engxenyeni engenhla umzimba wakhe wavuswa i-engela 45-60 degrees kuya ovundlile. Futhi emva yokudla iphelile udinga ukumphatha imizuzu amabili "ikholomu 'eyagwinya ubisi nge emoyeni ngokukhululekile ukuphuma.
Uma izinyathelo ezilula ezifana musa asize, udokotela wakho angase akukhuthaze ukusetshenziswa compounds zokwelapha noma amalungiselelo okwelapha. Futhi endabeni pathologies azalwa naso, impatho kuhlinzwa.
Izingadi izingane engavamile futhi yangasese Iningi BakaJehova eMoscow
Acer Z150: izici ukubuyekezwa. Ukuncika Acer Z150, akufakiwe
Truck "Volvo" nezici zabo